Haweenka Hirshabeelle oo taageeray guddoonka cusub ee Baarlamaanka Hirshabeelle+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Haweenka Hirshabeelle oo taageeray guddoonka cusub ee Baarlamaanka Hirshabeelle+(SAWIRRO).
Haweenka Hirshabeelle oo taageeray guddoonka cusub ee Baarlamaanka Hirshabeelle+(SAWIRRO).
Kulankani ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah Haweenka Hirshabeelle ee ku nool magaalada Jowhar ayaa u jeedkiisu ahaa taageeridda guddoonka Baarlamaanka Hirshaeelle oo dhowaantaan ay doorteen Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka maamulkaas.
Kulanka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka,iyo xaquuqul Insaanka Hirshabeelle, ayaa muddadi uu socday kulanka waxay haweenku diiradda ku saareen hambalyada guddoonka Baarlamaanka, iyagoo sheegay inay ka rejeeynayaan ilaalinta xaquuqda Haweenka uu dhigayo Dastuurka Hirshabeelle.
Ugu horeeyn waxaa goobta ka hadashay Maryan Maxamed Kuuloow oo ka mid ah Haweenka Hishabeelle. waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirtay guddoonka cusub ee Hirshabeelle.
Sacdiyo Maxamed Nuur oo ah siihayaha xilka Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Haweenka Hirshabeelle ayaa sheegtay in guddoonka cusub ee Baarlamaaka Hirshabeelle ka rajeynayaan in u u dhowro xaquuqda haweenka Hirshabeelle.
Previous articleMasuuliyiin ka tirsan Koofur Galbeed oo Baydhabo ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka XFS.
Next articleShirkadda Safe Air oo duulimaadyo ka bilowday Muqdisho+(SAWIRRO).